प्रचण्डवि,रुद्ध मु,द्दाको सुनुवाइ आज, कस्तो आउँदैछ फैसला ?::Point Nepal
काठमाडौं । नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ वि,रूद्ध अदालतको अ,पहेलना गरेको आरोपमा दर्ता मु,द्दाको सुनुवाइ आज हुने भएको छ ।
अधिवक्ता समीर बलामीले दाहालले विराटनगरको आमसभामा अ,दालतलक्षित बोलेको विषयलाई लिएर सोमबार निवेदन दिनुभएको थियो । दाहालले न्यायाधीशहरुको जनभावनाअनुसार फै,सला नगरे जनताको अ,दालतबाट फै,सला गर्ने भन्दै अदालत र न्यायाधीशलाई लक्षित गरी धम्कीसहितको अभिव्यक्ति दिएको रिट निवेदकले बताउनुभएको छ ।
‘सारा देशले सुने हुन्छ, सर्वोच्च अ,दालतले अन्यथा फै,सला गरेमा हामी सभामुखमार्फत प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाएर केपी ओलीलाई का,रबाही गर्ने छौं । हामीलाई अ,दालतप्रति विश्वास छ तर पनि जनताको अ,दालत ठूलो हो’, शुक्रबार विराटनगरमा आयोजित आमसभामा दाहालले भन्नुभएको थियो ।
यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की र पूर्वसभामुख द,मननाथ ढुंगानावि,रुद्ध पनि अ,दालतको अ,वहेलनामा छुट्टाछुट्टै निवेदन दर्ता भएको थियो ।
सर्वोच्चले सबै मु,द्दामा लिखित जवाफसहित अ,दालतमा उपस्थित हुन आदेश दिइसकेको छ ।
गंगा चौधरी भन्नुहुन्छ : नेताहरुको स्वार्थमा सति जान सकिसकिदैन ! म राजिनामा दिन्न ।